Nalalka Qalliinka, Jadwalka Hawlgalka, Looxaanta Caafimaadka - Wanyu
Shanghai Wanyu Medical Qalabka Co., Ltd. waxay inta badan ku hawlan tahay iibinta qalabka caafimaadka, iyadoo diiradda la saaray suuqgeynta qalabka qolka qalliinka, oo ay ku jiraan nalalka hawlgalka, miisaska hawlgalka, iyo shaashadda caafimaad. Khadadka alaabada oo dhan waa laga iibiyaa adduunka oo dhan, waxaanan leenahay wada-hawlgalayaal hay'ad gaar ah dalal badan oo ku yaal Yurub iyo Ameerika.
16 sano oo khibrad ah
In ka badan 60 alaabood
Qeybiye Dahab ah: 13
LEDD500 / 700 Saqafka LE ...
Hordhac LEDD500 / 700 waxaa loola jeedaa laydh daaweyn isbitaal oo laba jibaaran. Hoyga iftiinka caafimaad ee isbitaalku wuxuu ka samaysan yahay aluminium aluminium ah oo ay ku dhex jiraan saxan aluminium qaro weyn leh, kaas oo waxtar weyn u leh kala-baxa kuleylka. Nalka waa guluubka OSRAM, jaalle iyo cadaan. Shaashadda taabashada LCD waxay hagaajin kartaa iftiinka, heerkulka midabka iyo CRI, dhammaantoodna waa lagu hagaajin karaa toban heer. Gacanta wareejintu waxay qaadataa gacan aluminium fudud oo meelaynta saxda ah. Waxaa jira seddex ikhtiyaar oo loogu talagalay hubka guga, ...
LEDD620620 Saqafkii LED ...
Hordhac LEDD620 / 620 waxaa loola jeedaa labanlaab domes saqafka iftiinka hawlgalka caafimaadka. Badeecad cusub, oo lagu casriyeeyay iyadoo lagu saleynayo badeecada asalka ah. Qolofka aluminium ee aluminium, qaab-dhismeedka gudaha ee la cusbooneysiiyay, saameyn ku-fiiqidda kuleylka wanaagsan. 7 qaybood oo laydh ah, wadar ahaan 72 guluub, laba midab oo huruud iyo cadaan ah, guluub OSRAM oo tayo sare leh, heerkulka midabka 3500-5000K oo la hagaajin karo, CRI ka sareeya 90, iftiimintu waxay gaadhi kartaa 150,000 Lux. Gudiga hawlgalku waa shaashadda taabashada LCD, iftiiminta, midabka ...
LEDD730740 Saqafkii LED ...
Hordhac LEDD730740 waxaa loola jeedaa nalka labalaabka nalka qalliinka caafimaadka. Qolka qalliinka ee leh sanduuqa wax lagu sifeeyo, nooca petalku wuxuu ka fogaan karaa xannibaadda qulqulka hawada wuxuuna si aad ah hoos ugu dhigaa aagagga qulqulaya qulqulka hawada laminar. LEDD730740 nal qalliin caafimaad oo laba jibbaaran ayaa bixiya iftiinka ugu badan ee 150,000lux iyo heerkulka ugu badan ee midabka ee 5000K iyo max CRI ee 95. Dhammaan xuduudaha ayaa lagu hagaajin karaa toban heer oo ah guddiga xakamaynta shaashadda taabashada ee LCD. Gacan qaadku wuxuu ka samaysan yahay qalab cusub, caabid ...
LEDD500 / 700C + M Saqafka ...
Hordhac LEDD500700C + M waxaa loola jeedaa nalka qolka qalliinka LED-ka ee qallalan. Nidaamka kaamerada lagu rakibay iyo kormeeraha laalaada dibedda ayaa loo isticmaali karaa ujeedo tababar. Waxay awood u siineysaa la socodka iyo duubista howlaha. Codso ■ qalliinka caloosha / guud ne cudurada haweenka surgery qalliinka wadnaha / xididdada / wadnaha ■ neurosurgery ■ orthopedics ■ traumatology / Emergency or ■ urology / TURP ■ ent / Ophthalmology ■ endoscopy Angiography Feature 1. Nidaamka Kaamerada Lagu Sameeyay Kaamirada, looma baahna in la sudho waxaa la set kale ...
TS Manual Haydarooliga Su ...
Hordhac miiska qalliinka Haydarooliga ee TS waa sui ...
TDY-1 Shiinaha Electric M ...
Hordhac TDY-1 miiska hawlgalka koronto ado ...
TDY-Y-1 Ujeeddo badan ...
Hordhac TDY-Y-1electric hydrat operatin ...
FD-G-2 Shiinaha Electric ...
Hordhac FD-G-2 miis umul ah oo badan ...
Hordhac TS-D-100 waxaa loola jeedaa labalaab gacan elec ...
TS-DQ-100 Labaad Gacanta E ...
Hordhac TS-DQ-100 waxaa loola jeedaa labalaab gacan ...
QF-JX-300 Shiinaha ICU Me ...
Hordhac QF-JX-300 waxaa loola jeedaa ICU caafimaad br ...
TD-TS-100 Warshad Di ...
Hordhac TD-TS-100 waxaa loola jeedaa daawo isku dhafan ...